Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Omicron dia any Etazonia izao: Nohamafisin'ny CDC
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Departemantan'ny Fahasalamam-bahoaka Kalifornia sy San Francisco dia nanamafy fa ny tranga iray vao haingana momba ny COVID-19 teo amin'ny olona iray any Kalifornia dia vokatry ny variana Omicron (B.1.1.529). Ilay olona dia mpivahiny niverina avy any Afrika Atsimo tamin'ny 22 Novambra 2021. Ilay olona natao vakisiny tanteraka ary manana soritr'aretina malemy izay mihatsara, dia manao confinement ary efa nanao fitiliana tsara. Ny olona akaiky rehetra dia efa nifandray ary nisy fitsapana ratsy.
Ny fizotry ny génomika dia natao tao amin'ny University of California, San Francisco ary nohamafisina tao amin'ny CDC ny filaharana fa mifanaraka amin'ny variana Omicron. Ity no tranga voalohany voamarina momba ny COVID-19 nateraky ny variana Omicron hita tany Etazonia.
Tamin'ny 26 Novambra 2021, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia nanasokajy ny variana vaovao, B.1.1.529, ho Variant of Concern ary nomena anarana hoe Omicron ary tamin'ny 30 Novambra 2021, nosokajian'i Etazonia ho Variant of fiahiana. Ny CDC dia nanara-maso sy niomana tamim-pahavitrihana ho an'ity variana ity, ary hanohy hiasa amim-pahazotoana miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny indostria any Etazonia sy manerantany izahay mba hianatra bebe kokoa. Na dia eo aza ny fahitana an'i Omicron, Delta dia mijanona ho tebiteby lehibe indrindra any Etazonia.
Ny fivoahana vao haingana ny variana Omicron (B.1.1.529) dia manantitrantitra bebe kokoa ny maha-zava-dehibe ny fanaovana vaksiny, ny fanamafisam-peo ary ny paikady fisorohana ankapobeny ilaina hiarovana amin'ny COVID-19. Ny olon-drehetra 5 taona no ho miakatra dia tokony hanao vaksiny booster dia atolotra ho an'ny rehetra 18 taona no ho miakatra.